Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Aza atao ambanin-javatra ny risi-pom-bahoaka
INTY SY NDAY : Aza atao ambanin-javatra ny risi-pom-bahoaka
Vao iray volana izay no lasa amin’ity taona vaovao 2019 ity. Tao anatin’izay no nahatafapetraka ny mpitondra fanjakana vaovao tarihin’ny filohampirenena Andry Rajoelina. Ho an’ny mpanohitra ny hetsi-bahoaka dia zava-dehibe ho azy ireny ny fahatontosan’ny fifidianana toa izay natao tamin’ny volana desambra teo. Marihina koa anefa fa tsy filamatra akory ny fanaovana hetsi-bahoaka fa na ny fotoana holaniana aminy na ny mety ho akon’izany dia efa manahirana, saingy rehefa tonga amin’ny fetra farany tsy azo anoharana ny vahoaka noho ny fanamparam-pahefana, noho ny fampahantrana mahery vaika mihatra aminy, noho ny fandrobana ny harenany, noho ny fivarotan-tanindrazana amin’ny endriny maro, noho ny tsy fanajana ny zony sy ny hasiny, sy ny maro tsy ho voatanisa, ary indrindra, rehefa maneho fitakiana ny vahoaka nefa minia manentsin-tadiny ny mpitondra, dia tonga amin’ny dingana ho fiarovan-tena ny vahoaka, ka mikatsaka lamina vaovao eo anivon’ny fiaraha-monina hahitany ny anjara-masoandrony.
Izany hatrany no niseho teto tamin’ireo hetsi-bahoaka hatrizay fa tsy hoe hadalana na fahavendranan’ny vahoaka akory no ndeha hiroso amin’ny hetsika toa ireny, na ny tamin’ny 1947 na 1971 na 1972 na 1991 na 2002 na 2009, na izay mbola ho avy…”
Izahay koa anefa dia mahatsapa fa mavesa-danja lavitra noho ny vokatry ny safidim-bahoaka amin’ny raharaham-pifidianana ny vokatry ny hetsi-bahoaka nahatonga mpitondra eo amin’ny fahefam-panjakana, satria ny hetsi-bahoaka matetika dia namoizan’ny vahoaka ny asany, ny ainy, nandatsahany ny rany, ny hatsembohany, ny fananany; ka rariny sy hitsiny izy raha sarotiny amin’ny nitantanana izany vokatry ny hetsi-bahoaka izany. Ny voka-pifidianana kosa dia ampahany ihany amin’ny hetsi-bahoaka ary tena seho tsy misy afa-tsy ny fandehanana mandatsa-bato aza. Raha mifanandrify amin’ny olona nasandratry ny vahoaka tamin’ny hetsika moa no voafidy, vao mainka goavana ny lanjan’ny antoka tokony hanomezan’ny mpitondra valimbabena ny vahoaka.
Noho izany rehetra izany, raha vao avy nahatsiaro ny fahafolo taonan’ny Raharaha 7 Febroary isika tamin’ny alakamisy teo, dia sarihina ihany ny fisainan’ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga. Fantatra fa maro amin’ny olona tonga ao anatin’ny fitondrana no tsy nandray anjara mihitsy tamin’izany hetsi-bahoaka izany teto na ovian na oviana. Ary tsy vitsy amin’izy ireo aza no mety ho nanohitra mihitsy ny hetsi-bahoaka.
Tonga eo ampelan-tananareo izao ny fahefana. Nomen’ny vahoaka fitokisana hitondra ny tany sy ny fanjakana tamin’ny alalan’ny fifidianana i Andry Rajoelina, ary izy filohampirenena no nisafidy anareo ho mpiara-miasa aminy. Ny hafatra dia tsotra: “tandrovy hatrany ny afom-pitiavan-tanindrazana ao amin’ny vahoaka”. Efa famerimberinay eto fa “ny lanjan’ny risi-pom-bahoaka dia fepetra tsy voavidy vola ary tsy ho hita any anivon’ireny fifampiraharahana etsy sy eroa, hatreo amin’ny sehatra iraisampirenena ireny, ka aza atao ambanin-javatra ny mitahiry azy hatrany, ny miezaka misarika azy ho azo antoka fa ho fanoitran’ny fanavotana sy fanarenam-pirenena.
Mifamatotra ny risi-pom-bahoaka sy ny fitiavan-tanindrazana ao anatiny ka aoka tsy ho ianareo mitana ny fahefam-panjakana ireo no sanatriavina, ndeha hamotika izany na hanambany izany. Lasa fahavalom-bahoaka ianareo raha toa ka izany no miseho. Tsy mahasoa ny firenena, tsy mahatsara anareo mpitondra, ary tsy mampisandratra ny vahoaka ny fivadihan’ny rasa ka sanatria lasa fahavalom-bahoaka ianareo mpitondra. Noho izany, katsaho ny risi-pom-bahoaka mba hipololotra hatrany ny fitiavan-tanindrazana ao anatin’ny ambanilanitra ho fanoitran’ny fanavotam-pirenena.